Natiijo horudhac ah oo laga soo saaray qaraxii ka dhacay Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar… – Hagaag.com
Natiijo horudhac ah oo laga soo saaray qaraxii ka dhacay Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar…
Wasaaradda Amniga Gudaha oo tixraacaayso warbixin baariseed hor dhac ah oo ay sameeyeen hay’adaha Amniga ee DFS kuna saabsan qaraxii ka dhacay Xaruunta Dowladda Hoose ee Xamar 24/07/2019, waxay Wasaaradda Amnigu la wadaagaysaa Bulshada Soomaaliyeed sida soo socota.
Qaraxa ka dhacay xarunta gobolka Banaadir ayaa waxaa ku dhintey mas’uuliyiin uu ka mid ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow, guddoomiye ku xigeeno,agaasimayaal iyo shaqaale kale.
Natiijadan ayaa waxaa lagu sheegay in qarxa uu ahaa mid ay ka dambeysay gabar ka mid ahayd dadkii ka qeybgalay kulankii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir.
Halkan ka aqriso Natiijada ay dowlada soo bandhigtey;
Ugu horayn, Dowladda Soomaliyeed waxay tacsi u diraysa intii ku dhimatay, sidoo kale caafimaad deg deg ah u rajaynaysa intii ku dhaawacantay falki foosha xumaa ee ka dhacay Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar.
Dowladda Soomaliya ayaa cadaynaysa falkaasi in uu ahaa dhibato loo geestay Shacabka Soomaliyeed.
Baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen Hay’adaha Amniga ayaa lagu ogaaday in ay is qarxisay ruux nafteed haligto ah oo Dumar ah kana shaqaynaysay Dowlada Hoose ee Xamar, ayadoo kaalmo ka heleysay ruux kale oo Dumar ah oo ku qornaa kaaliye, shaqaalana ka ahayd Xaruunta Dowladda Hoose.